Ọ Tụghị Egwu Mgbe A Na-agba Ya Ajụjụ na Mgbe A Na-eyi Ya Egwu Ọnwụ | André Elias
A MỤRỤ YA N’AFỌ 1915
MERE YA BAPTIZIM N’AFỌ 1940
ONYE Ọ BỤ Ọ bụ ọsụ ụzọ obi kara nke kwụsiri ike n’okwukwe ya mgbe a na-agba ya ajụjụ na mgbe e yiri ya egwu ọnwụ.
N’OGE a na-alụ Agha Ụwa nke Abụọ, Nwanna Elias na nwunye ya Josephine bịara n’isi ụlọ ọrụ ndị amị Japan zara ọnụ ha. A na-eze ndị amị Japan a eze. A na-akpọkwa ha ndị Kempeitai. Isi ụlọ ọrụ ha dị na Sukabumi, dị́ n’Ebe Ọdịda Anyanwụ Java. Ọ bụ Nwanna André ka ha bu ụzọ gbaa ajụjụ. Ha jụkara ya ajụjụ ahụ́. Ha jụrụ ya, sị: “Ole ndị bụ Ndịàmà Jehova? Ùnu na-agba ọchịchị Japan ụkwụ? Ùnu bụ ndị nledo?”
Nwanna André zara ha, sị: “Anyị bụ ndị ohu Chineke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile. O nweghịkwa ihe anyị mere.” Onyeisi ndị amị ahụ mịịrị mma agha e konyere n’ahụ́ ájá ma welie ya elu.
O ji iwe jụọ Nwanna André, sị: “Ị̀ ma na m nwere ike igbu gị ugbu a?” Nwanna André kpunyere ihu na tebụl ma kpee ekpere n’obi ya. Mgbe onyeisi ndị amị ahụ gbachara nkịtị ruo ogologo oge, ọ dapụrụ n’ọchị ma sị: “Ị bụ dimkpa!” Mgbe ahụ, ọ kpọziri nwunye ya Josephine ma gbaa ya ajụjụ. Mgbe ọ chọpụtara na ihe André na nwunye ya zara bụ otu, o ji olu ike kwuo, sị: “Unu abụghị ndị nledo. Sinụ ebe a pụọ!”
Mgbe ọtụtụ ọnwa gachara, “ụmụnna ụgha” gara gwa ndị ọchịchị na Nwanna André bụ onye ọjọọ. N’ihi ya, e jidere ya ma tụọ ya mkpọrọ. (2 Kọr. 11:26) Ruo ọtụtụ ọnwa, ihe ọ na-eri bụ nri ọ tụụtara na gọta dị n’ụlọ mkpọrọ. Ma, ndị ahụ tụrụ ya mkpọrọ emelighị ka ọ dapụ n’okwukwe. Mgbe nwunye ya bịara leta ya, o si n’ebe ahụ a tụrụ ya mkpọrọ takwunyere ya, sị: “Echegbula onwe gị. Ma hà gburu m ma hà hapụrụ m, agaghị m ahapụ Jehova. Ha nwere ike igbu m, ma ha agaghị emeli ka m gọnahụ Jehova.”
Mgbe Nwanna André nọchara ọnwa isii n’ụlọ mkpọrọ, ọ wụchara n’ụlọikpe dị na Jakata zara ọnụ ya. A tọhapụkwara ya.
Mgbe ihe dị ka afọ iri atọ gachara, n’oge gọọmenti Indoneshia machibidoro Ndịàmà Jehova iwu ọzọ, ọkàiwu nọ n’obodo Manado, dị́ n’Ebe Ugwu Sulawesi, gwara Nwanna André ka ọ bịa n’ọfis ya. Mgbe ọ bịara, ọ jụrụ ya, sị: “Ị̀ ma na a machibidola Ndịàmà Jehova iwu?”
Nwanna André zara ya na ya ma.
Ọ jụziri Nwanna André, sị: “Ì jikerela ugbu a ịgbanwe okpukpe gị?”
Nwanna André kụrụ aka n’obi ma si ya, “I nwere ike ịdọpụta obi m. Ma ị gaghị emeli ka m gbanwee okpukpe m.”
Ọkàiwu ahụ gwara Nwanna André lawa. O nyeghịkwa ya nsogbu ọzọ.
Nwanna André nwụrụ n’afọ 2000, mgbe ọ gbara afọ iri asatọ na ise. O ji obi ya niile sụọ ụzọ afọ iri isii.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Onye Ọsụ Ụzọ Na-anaghị Atụ Egwu
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere Akwụkwọ Mgbaafọ Ndịàmà Jehova nke 2016
Nke a na-egere egere Họrọ ụdị nke ị ga-ewere Akwụkwọ Mgbaafọ Ndịàmà Jehova nke 2016
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Akwụkwọ Mgbaafọ Ndịàmà Jehova nke 2016